सेक्स Archives - Lokpati.com
Tag - सेक्स
जब कुनै पुरुषले उसको सहमति बिना महिलासँग जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राख्छ भने त्यो बलात्कार हो। तर यदि कुनै महिलाले आफ्नो सहमति बिना पुरुषलाई जबरजस्ती गर्न बाध्य पार्छ भने के यो पनि बलात्कार होइन र ?
इंगल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा यो...
विश्वमा अहिले नयाँ नयाँ रोगहरु देखा परिरहेका छन्। बदलिदो परिवेषसँगै यौन सम्बन्धी रोगहरु पनि बढ्दै गएका छन्। यहीक्रममा यौन संक्रमण (एसटीआई) को कारण हुने रोगहरू पनि अपवाद हुँदैनन्।
हामी तपाईंलाई चार त्यस्ता ब्याक्टेरियाहरूको...
यौनक्रियाका दौरानमा सबैले पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् नै भन्ने छैन। कतिपय मानिस यौनजीवनबाट दुखी पनि देखिन्छन्। यौन सन्तुष्टि मज्जाले प्राप्त हुनुलाई चरमोत्कर्ष भनिन्छ। चरमोत्कर्षमा पुग्दा स्वास्थ्यमा धेरै असर देखिने...
सेक्स एक यस्तो विषय हो, जसमा सबैको चासो छ, तर मानिस यस विषयमा कुरा गर्न हिचकिचाउँछन्। पुरुषहरु सेक्सको बारेमा आफ्नो विचार खुलस्त रुपमा राख्न सक्छन। तर यदि महिलाहरू यस विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहन्छिन भने पनि उनीहरुलाई गलत...
काठमाडौं। सधैं आकर्षक देखिने चाहना सबैलाई हुन्छ। तर कसरी ? बेलायतका शोधकर्ता डाक्टर डेभिड विक्सले मानिसमा छिटै आउने बुढोपनालाई कसरी रोक्न सकिन्छ र तन्नेरीपनालाई कसरी लामो समयसम्म कायम राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान...
काठमाडौं। यौन र शारीरिक सम्बन्धसँग जोडिएका कयौं किस्साहरु वास्तवमा मिथ्यामा गएर टुङिगएका हुन्छन्। सेक्स विशेषज्ञ डाक्टर निक्की गोल्डस्टीनले सेक्ससँग जोडिएका यस्तै धेरै मिथ्याहरुलाई हटाउने प्रयास गरेका छन्। यहाँ त्यही...
काठमाडौं । कण्डमलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रुपमा लिइन्छ । यौनजन्य रोगहरुबाट बचाउन यसले सहयोग गर्छ । मानिसहरुले कण्डमलाई यौनसम्पर्कको बेला प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
कण्डम नेपालका स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिना शुल्क पाइन्छ ।...
ज्ञान-विज्ञान • समाचार
यस विषयमा अध्ययन गर्न पछिल्लो पटक वैज्ञानिकहरु थ्री...